Akwụkwọ Ryan Smith na Martech Zone |
Edemede site na Ryan Smith
Kwụsị ikwu okwu ma gee ntị
Tuesday, January 29, 2013 Tuesday, January 29, 2013 Ryan Smith
Ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ. Anyị niile anụla otu nde ugboro. Ihe mere anyi ji nu ihe a otutu oge bu nihi na obu nani otu iwu iwu ka enwere ike igwa ya banyere ndi mmadu. Nsogbu kasịnụ m na-ahụ mgbe niile bụ na ndị mmadụ na-agwa ndị na-eso ụzọ ha okwu kama ịgwa ha okwu. N'oge na-adịbeghị anya, anyị hụrụ mkpesa ndị ahịa na Twitter banyere otu n'ime ndị ahịa anyị.
Social Media Bụ PR ọhụrụ
N’oge na-adịbeghị anya mụ na ụfọdụ n’ime ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze na-eri nri ehihie, ma dị ka mkparịta ụka mgbe niile tụgharịrị na ụzọ na usoro eji arụ ọrụ anyị. Dị ka naanị otu n'ime ndị na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe dịka naanị ụdị nkwukọrịta maka ndị ahịa, akụkụ m na mkparịta ụka ahụ ga-adị ka nke kachasị mkpụmkpụ. Nke a tụgharịrị ka ọ bụghị ikpe, ọ mere ka m chee: Social media abụkwaghị
Monday, August 23, 2010 Sunday, October 4, 2015 Ryan Smith
Ọ dịghị mfe ịzụlite nnukwu ndị na-eso ụzọ na Twitter. Easiestzọ kachasị mfe bụ ịghọ aghụghọ na imefu ego gị na-azụ ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ site na otu “azụmaahịa” ndị a na-enye ọrụ dị otú ahụ n'ịntanetị. Kedu ihe a ga-enweta site na ịzụta ndị na-eso ụzọ? Yabụ ma ọ bụrụ na ịnwere ụmụazụ 15,000 na-enweghị mmasị na azụmaahịa gị yana ozi ị na-ezi? Yingzụta ndị na-eso ụzọ anaghị arụ ọrụ, n'ihi na ịnwe ndị na-eso ụzọ
Chọrọ ịma akụkụ kachasị mma nke iji usoro mgbasa ozi eme ihe dịka akụkụ nke mkpọsa mmekọrịta ọha na eze gị? Enweghị iwu. A na-echetara ndị mmadụ oge niile iwu. Anyị ga-agbaso AP Stylebook, a ga-edepụta akụkọ akụkọ n'ụzọ ụfọdụ ma gbuo ya n'oge ụfọdụ. Mgbasa mgbasa ozi bụ ohere maka ụlọ ọrụ gị iji mebie ihe ahụ ma mepụta ọdịnaya pụrụ iche nke metụtara ọha na eze n'ezie. Isi okwu